Kelly Ripa arikurova mutana co-host Michael Strahan mune ratings: Details - Nhau
Kelly Ripa arikurova mutana co-host Michael Strahan mune ratings: Details
Mutambo wakatanga apo Michael Strahan akazivisa muna Kubvumbi 2016 kuti aive kusiya 'Rarama! Ndiina Kelly naMichael ' mushure memakore angangoita mana uye kuenda kugigi nyowani inobhadhara pa 'Good Morning America.' Mishumo yakaratidza kuti mubati-pamwe Kelly Ripa aive 'kupofumadzwa' nesarudzo yaMichael yekubhomba , iyo yaakadzidza nezve maminetsi mashoma isati yaitwa kuruzhinji.
Zvino, makore maviri nehafu gare gare, Peji Rechitanhatu mishumo , Kelly uye zvazvino 'Rarama!' co-host Ryan Seacrest vari kurova Michael mumatanho.
MunaGunyana, aimbove mutambi wenhabvu naSara Haines vakabatana kuti vagamuchire awa yechitatu yeawa yeABC 'Good Morning America' inonzi 'GMA Day.' Zvinoenderana nepeji rechitanhatu, 'manhamba ekutanga anoteedzera yaakange aratidzwa neanopfuura mamirioni evaoni,' kunyangwe iyo makuhwa yeNew York Post inoratidzawo kuti 'mazuva ekutanga kwazvo.'
Zvinoenderana neNielsen ratings, 'GMA Day' ine 1.76 mamirioni evaoni vachiri 'Rarama! NaKelly naRyan 'vaive nemamirioni 2.85 panguva imwecheteyo.
Michael, zvisinei, haana hanya - kana ABC haina kudaro, Peji rechitanhatu rinoshuma. 'Michael ari kuwana nguva yakanaka achishanda ku' GMA 'uye' GMA Day. ' Haana kunetseka zvachose. Iye anoziva kuti 'GMA Day' chiratidziro chitsva, uye dzimwe nguva zvinotora mineti kuti chiitwe. Anoda kushanda naSara nechikwata chitsva uye anofara kuvepo, 'sosi padyo naye akaudza The Post.
Mutungamiri weABC News, James Goldston akayerawo mukati, achiudza Peji Rechitanhatu kuti netiweki inofara nemafambiro ari kuita 'GMA Day' kusvika zvino. 'Tinofara zvisingaite naMichael naSara nekuita kwavo pachiratidziro. Tiri mwedzi miviri, pamberi pesarudzo uye munzira chaiyo, 'akadaro exec. 'Michael anounza hutungamiriri hwatinoziva kwazvo kubva pamazuva ake enhabvu kuenda kuchiratidziro - hatingave mumaoko akanaka.'
Disney-ABC Imba Varaidzo uye Kugoverwa kweTV
'GMA Day' iri kuunzawo vaoni vashoma pane iyo 'Iyo Chew' - iyo yakadzimwa mushure memwaka minomwe muna Chivabvu mushure mekunge mubati-mukwikwidzi Mario Batali akapomedzerwa hunhu hwepabonde - akaita panguva imwecheteyo. (Peji rechitanhatu rinoshuma kuti 'Chew' iri kuwana mamirioni 2.25 muoni muna 2017.) Asi 'The Chew,' akadaro insider akaudza Peji Yechitanhatu, zvakare akasimuka neanoona vashoma asati akura ratidziro dzayo.
Sean Hannity nemukadzi vakarambana muchivande gore rakapfuura: Chirevo
Taylor Swift uye mukomana mutsva mukomana Joe Alwyn vakaona pamwechete muNashville
janet jackson murume nemucheche
sofia vergara uye nick loeb
steven tyler wemakore gumi nemana musikana
miley cyrus uye kaitlynn carter pics
jamie foxx kuva nemwana
ko phaedra akadzingwa kubva kuatlanta madzimai epamba